Culumaa’udiinka Ahlu Sunna oo ka hadlay qaraxyada Muqdisho ku soo noqnoqday, baaqna u jeediyay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed – idalenews.com
Culumaa’udiinka Ahlu Sunna oo ka hadlay qaraxyada Muqdisho ku soo noqnoqday, baaqna u jeediyay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed
Golaha sare ee Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa ka hadlay qaraxyada is miidaaminta ah ee maalmahaan ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo galaaftay nolosha dad rayid ah iyo khasaaro soo gaaray hanti fara badan.
Bayaan ka soo baxay Golaha sare ee Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca maanta ayaa lagu sheegay in diinta Islaamka aanay marnaba ku soo aroorin in qof Muslim ah uu naftiisa gooyo isagoo is qarxinaya, mindi isku dilaya, xarig isku merjinaya iyo siyaabo kasta oo qofku isku dilayo.
“Diinta Islaamka ma jirto meel ay ku caddeyneyso in qof Muslim ah uu is dilo ama uu dilo qof kale oo Muslim ah” ayaa lagu bayaanka ka soo baxay Golaha Sare ee Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca oo qoraalkiisa ku cambaareeyay qaraxyada is miidaaminta ah ee Muqdisho ku soo noqnoqday.
Golaha ayaa sheegay inuu tacsi u dirayo ehelada dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxyada is miidaaminta ah ee dalka ka dhacaya, wuxuuna Golaha sare ee Culumaa’udiinka Ahlu Sunna hoosta ka xariiqay in falalka qaraxyada iyo dilalka dadka waxgalka u ah bulshada ay ka dambeeyaan kooxaha khawaarijta Al-Shabaab.
“Kooxda argagixisada Shabaab la baxay ma jirto cid ay cafinayaan, sidaas daraadeed Dowladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed waa inay fadhiga ka kacaan ayna si wadajir ah uga hortagaan gummaadka ay dalka ka wadaan” ayaa lagu yiri bayaanka.
Falalka Al-Shabaab ay dalka ka waddo oo dhibaatooyinka kala duwan ugu geysaneyso shacabka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu Goluhu tilmaamay inay yihiin masiibo loo soo diray dalka, dadka iyo diinta Islaamka, bacdamaa ay dilayaan macallimiintii dugsiyada Qur’aanka, Mashaa’iqda, waxgaradka iyo aqoonyahanada.
Dhinaca kale warka ka soo baxay Golaha sare ee Culumada Ahlu Sunna ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ay ku soo laalaabteen falalka qaraxyada is miidaaminta ah, iyadoo muddo bil gudaheed ah ay qaraxyo isugu jira rag isku soo xiray walxaha qarxa iyo gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay galeen baararka ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Dekeda Muqdisho oo laga dhoofinayo xoolihii ugu badnaa muddo 22 sano ah
Shacabka Muqdisho oo qaati ka jooga sabbeynta sarifka Dollarka iyo Shilinka Soomaaliga oo daaqada ka sii baxaya